mitantara ny zava-nitranga rehetra, fivoriana maro samihafa sy ny fiainana iray manontolon’i Marc Ravalomanana ny taona 2009 ka hatramin'ny 2013. Ilay mpanatontosa sarimihetsika Lotte Mik-Meyer no namokatra ity horonantsarimihetsika manana endrika fanadihadiana ity izay hivoaka any amin’ireo trano fijerena horonantsary any Eoropa tahaka ny ao Danemark, Alemaina, Frantsa … Ary andrasana fatratra eto Madagasikara ihany koa. Tena nahaliana ireo rehetra nanatrika ny famoahana azy voalohany tany Copenhague izy ity ary azo antoka ihany koa fa tena mahaliana ny Malagasy satria, araka ny efa notaterina teto dia maro ny zava-mitranga mety tsy fantatry ny olom-pirenena kanefa hita ao anatin’io « Return of a President » io. Misimisy ihany mantsy ny serasera diso ary miendrika fanosoram-potaka sy fanaratsiana fotsiny ny filoha Ravalomanana teto nanomboka ny taona 2009 sy nandritra ny fitondrana tetezamita, misy noho izany ny fihevitra mety diso any an-dohan’ny tsirairay any. Izany indrindra no maha zava-dehibe ny rakitsary tahaka itony izay vavolombelon’ny tantara ary mirakitra ao anatin’ny tantaram-pirenena. Mbola hihaona amin’ireo Malagasy monina any Eoropa moa amin’ny sabotsy 25 martsa ho avy izao, ao Paris renivohitra Frantsay, i Marc Ravalomanana sy ramatoa vadiny mba hahafahana mifanakalo vaovao sy efa mifampizara hevitra avy hatrany ny amin’ny tokony hatao hanarenana ny firenena, Tohin’ilay famoahana horonantsary any Eoropa izao fihaonana izao ary ho fanairana sy fanetsehana ny Malagasy mila ravinahitra any ivelany mba hitondra ny anjara birikin’izy ireo amin’ny fanarenana ny Firenena. Kandida filoha amin’ny 2018 i Marc Ravalomanana ary efa miomana fatratra ny amin’izany.